Ratidza Kutenda—Ita Zvisarudzo Nekuchenjera | Yokudzidza
‘Ramba uchikumbira uine kutenda, uine chokwadi nazvo.’—JAK. 1:6.
NZIYO: 81, 70
Nei tichifanira kubvuma kuti tinotofanira kuita zvisarudzo muupenyu?
Nei vamwe vasingafaniri kutiitira zvisarudzo?
Nei dzimwe nguva tichifanira kuchinja chisarudzo chatakaita?
1. Chii chakaita kuti Kaini atadze kusarudza nekuchenjera, uye zvakaguma nei?
KAINI aifanira kusarudza zvekuita. Aigona kusarudza kukunda manzwiro aaiita kana kurega manzwiro iwayo achimutuma kuita zvakaipa. Zvaaizosarudza zvaizoita kuti zvinhu zvimufambire zvakanaka kana kuti zvimuipire kweupenyu hwake hwose. Bhaibheri rinotiudza kuti Kaini akaita chisarudzo chakaipa. Chisarudzo chaakaita chakaguma nekufa kwemunin’ina wake Abheri, uyo akanga akatendeka. Uye chisarudzo chaKaini chakaita kuti asava neushamwari hwakanaka neMusiki wake.—Gen. 4:3-16.
2. Kukwanisa kuita zvisarudzo nekuchenjera kwakakosha zvakadini?
2 Isuwo tine zvisarudzo zvatinofanira kuita. Zvimwe zvakakura asi zvimwe zvidiki. Zvisinei, zvisarudzo zvakawanda zvatinoita zvinogona kuchinja upenyu hwedu chaizvo. Patinoita zvisarudzo zvakanaka matambudziko edu anogona kuva mashoma uye tinowedzera kuva nerugare. Asi patinoita zvisarudzo zvakaipa tinogona kuva nematambudziko akawanda uye kakawanda kacho zvatinoronga hazvibudiriri.—Zvir. 14:8.
3. (a) Kana tichida kuita zvisarudzo nekuchenjera, tinofanira kuva nekutenda muchii? (b) Tichapindura mibvunzo ipi?
3 Chii chichatibatsira kuita zvisarudzo nekuchenjera? Tinofanira kuva nekutenda muna Mwari, tiine chokwadi chekuti anoda uye anokwanisa kutibatsira kuti tive vanhu vakachenjera. Tinofanirawo kuva nekutenda muShoko raJehovha tichivimba nemazano ari muShoko rake. (Verenga Jakobho 1:5-8.) Patinoswedera pedyo naye towedzera kuda Shoko rake, tinosvika pakuva nechivimbo chekuti mazano ake anotibatsira. Izvi zvinoita kuti titange taongorora kuti Shoko raMwari rinotii pese patinenge tichida kuita zvisarudzo. Asi tingaita sei kuti tivandudze maitiro atinoita zvisarudzo? Uye kana taita chisarudzo zvinoreva here kuti hatitombofaniri kuchichinja?
TINOFANIRA KUITA ZVISARUDZO MUUPENYU
4. Adhamu aifanira kusarudzei, uye zvaizoguma nei?
4 Kubva pavakasikwa, vanhu vaifanira kuita zvisarudzo zvinokosha muupenyu. Adhamu aifanira kusarudza kuti oteerera Musiki wake here kana kuti Evha. Aiva nechido chekusarudza, asi unofungei nezvechisarudzo chaakaita? Adhamu akaita chisarudzo chakaipa chekuteerera mudzimai wake ainge atsauswa. Izvi zvakaita kuti adzingwe muParadhiso maaigara uye zvakaita kuti azofa. Asi hazvina kugumira ipapo. Nanhasi tiri kutambura nemhaka yechisarudzo chakaipa chakaitwa naAdhamu.
5. Tinofanira kuona sei nyaya yekuita zvisarudzo?
5 Vamwe vanofunga kuti upenyu hwaizowedzera kunakidza kudai vaisafanira kuita zvisarudzo. Unofungawo saizvozvo here? Yeuka kuti Jehovha haana kusika vanhu kuti vaite semarobhoti asingakwanisi kufunga nekuita zvisarudzo. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tingaita sei zvisarudzo nekuchenjera. Jehovha anoda kuti tiite zvisarudzo uye izvozvo zvinokosha. Ona humwe uchapupu hunoratidza izvozvo.
6, 7. VaIsraeri vaigona kusarudza kuitei, uye nei zvakanga zvakavaomera kuti vasarudze nekuchenjera? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
6 Pavakanga vava kugara muNyika Yakapikirwa, vaIsraeri vaifanira kuita chisarudzo chinokosha chekuti vonamata Jehovha here kana kuti vamwewo vanamwari. (Verenga Joshua 24:15.) Ichocho chingaita sechisarudzo chaiva nyore. Asi zvavaizosarudza zvaigona kuita kuti vararame kana kuti vafe. Panguva yeVatongi, vaIsraeri vaigara vachiita zvisarudzo zvisina kunaka. Vaisiya Jehovha vachinamata vanamwari venhema. (Vat. 2:3, 11-23) Fungawo zvakazoitika pane imwe nguva vanhu vaMwari pavaifanira kuita chisarudzo. Muprofita Eriya akavaudza kuti vasarudze kuti vaida kushumira Jehovha here kana kushumira Bhaari, mwari wenhema. (1 Madz. 18:21) Eriya akatsiura vanhu ivavo nemhaka yekuti vakanga vasingazivi kuti vosarudza zvipi. Unogona kufunga kuti chisarudzo chacho chaiva nyore nekuti kushumira Jehovha kwagara kwakanaka uye kunobatsira. Chokwadi, hapana munhu aifunga zvakanaka aizotorwa mwoyo naBhaari kana kuda kumunamata. Kunyange zvakadaro, vaIsraeri ivavo vaiva ‘nemwoyo miviri.’ Saka Eriya akavakurudzira kuti vasarudze kunamata Jehovha.
7 Nei zvingangodaro zvakaomera vaIsraeri ivavo kuti vasarudze nekuchenjera? Kutanga, vakanga vasisina kutenda muna Jehovha uye vairamba kumuteerera. Vakanga vasingavimbi naJehovha uye vakanga vasina kudzidza nezvake kana nezveuchenjeri hwake. Kudai vakanga vakazvidzidza zvaizovabatsira kuita zvisarudzo neuchenjeri. (Pis. 25:12) Uyewo, vakanga vabvumira vamwe vanhu kuti vavanyengere kunyange kutovasarudzira zvekuita. Vanhu vaigara munyika yacho avo vaisava vashumiri vaJehovha vakakanganisa mafungiro evaIsraeri uye vaIsraeri vakapedzisira vava kuvatevedzera. Jehovha akanga avanyevera kare kuti izvozvo zvaigona kuzoitika.—Eks. 23:2.
TINOFANIRA KUSARUDZIRWA NEVAMWE HERE?
8. Zvakaitwa nevaIsraeri zvinotidzidzisei panyaya yekuita zvisarudzo?
8 Mienzaniso yatataura nezvayo inotidzidzisa zvakajeka kuti tinofanira kusarudza tega zvatinoda kuita uye Bhaibheri ndiro rinotibatsira kuti tisarudze nekuchenjera. VaGaratiya 6:5 inotiyeuchidza kuti: “Mumwe nomumwe achatakura mutoro wake.” Hatifaniri kupa mumwe munhu basa rekutisarudzira zvekuita. Asi tinofanira kudzidza tega kuti zvinodiwa naMwari ndezvipi tosarudza kuzviita.
9. Nei zvingava nengozi kurega vamwe vachitisarudzira?
9 Zvingafamba sei kuti tipedzisire tapinda mungozi yekurega vamwe vachitiitira zvisarudzo? Vamwe vanogona kutimanikidza kuita chisarudzo chakaipa. (Zvir. 1:10, 15) Pasinei nekuti vamwe vanoedza sei kutimanikidza, tinofanira kuita tega zvisarudzo zvinoenderana nehana yedu yakadzidziswa neBhaibheri. Kana tikarega vamwe vachitisarudzira zvekuita, tinenge tichitosarudza ‘kuvatevera.’ Tinenge taita chisarudzo chinogona kuzotipinza muna taisireva.
10. Pauro aifanira kunyevera vaGaratiya nezvei?
10 Muapostora Pauro akanyevera vaGaratiya nezvengozi yekurega vamwe vachivasarudzira zvinhu zvavaifanira kusarudza vega. (Verenga VaGaratiya 4:17.) Vamwe vaiva muungano vaida kuitira vamwe zvisarudzo kuti vavaparadzanise nevaapostora. Chii chaiita kuti vadaro? Vanhu ivavo vaingozvifunga uye vaida kuva nemukurumbira. Vaisazvininipisa uye vaisaremekedza kodzero yevamwe vaKristu yekuzvisarudzira zvavanoda.
11. Tingabatsira sei vamwe pavanenge vachida kuita zvisarudzo?
11 Pauro akaratidza muenzaniso wakanaka panyaya yekuremekedza kodzero yevamwe yekusarudza zvavanoda. (Verenga 2 VaKorinde 1:24.) Mazuva ano, vakuru vanofanira kutevedzera muenzaniso iwoyo pavanenge vachipa vamwe mazano panyaya dzekuti munhu anofanira kuzvisarudzira ega. Vane chido chekuudza vamwe vari muungano zvinotaurwa neBhaibheri, asi vanongwarira kuti vasiye hama nehanzvadzi dzichizvisarudzira dzega. Izvozvo zvine musoro nekuti munhu akazvisarudzira hapana waanozochema naye mangwana. Chidzidzo chinokosha ndeichi: Tinogona kuratidza kuti tinoda kubatsira vamwe kunzwisisa mazano eBhaibheri anoshanda panyaya yavo. Kunyange zvakadaro, vane kodzero yekuzvisarudzira vega uye ibasa ravo kuita izvozvo. Pavanozvisarudzira vega nekuchenjera, zvinovabatsira. Zviri pachena kuti hatifaniri kufunga kuti tine simba rekusarudzira vamwe zvekuita.
Vakuru vane rudo vanobatsira vamwe kuti vaite zvisarudzo vega (Ona ndima 11)
USAREGA MANZWIRO AKO ACHIKUTUNGAMIRIRA PAKUSARUDZA
12, 13. Nei zviine ngozi kungoita zvinodiwa nemwoyo yedu patinenge takatsamwa kana kuti takaora mwoyo?
12 Vanhu vanowanzotaura kuti: Ita zvinodiwa nemwoyo wako. Asi kuita izvozvo kunogona kuva nengozi. Bhaibheri rinotinyevera kuti tisarega mwoyo yedu ine chivi kana manzwiro edu zvichititungamirira pakuita zvisarudzo. (Zvir. 28:26) Uye mienzaniso yakawanda iri muBhaibheri inoratidza matambudziko anovapo kana munhu akaita zvinodiwa nemwoyo wake. Ngozi iri pakuti mwoyo yevanhu vane chivi ‘inonyengera kupfuura zvinhu zvose uye yakaipa kwazvo.’ (Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Madz. 11:9) Saka chii chinogona kuitika kwatiri kana tikangoita zvinodiwa nemwoyo yedu?
13 Mwoyo wemuKristu wakakosha nekuti tinorayirwa kuti tide Jehovha nemwoyo wedu wose, uye tide muvakidzani wedu semadiro atinozviita. (Mat. 22:37-39) Asi mavhesi ari mundima yapfuura anoratidza kuti kurega mafungiro edu achititungamirira pakuita zvisarudzo kwakaipirei. Semuenzaniso, chii chinogona kuitika kana tikaita zvisarudzo takatsamwa? Kana takambozviita pane imwe nguva tinogona kunge tichitoziva mhinduro yacho. (Zvir. 14:17; 29:22) Ungaita zvisarudzo zvakanaka here paunenge wakaora mwoyo? (Num. 32:6-12; Zvir. 24:10) Yeuka kuti Shoko raMwari rinoratidza uchenjeri hwekuva “muranda womutemo waMwari.” (VaR. 7:25) Zviri pachena kuti manzwiro edu anogona kutinyengera kana tikarega achititungamirira patinenge tichiita zvisarudzo zvinokosha.
PAUNOFANIRA KUCHINJA ZVAWAKASARUDZA
14. Tinoziva sei kuti zvakakodzera kuti munhu achinje zvaanenge ambosarudza?
14 Tinofanira kuita zvisarudzo neuchenjeri. Asi izvozvo hazvirevi kuti hatifaniri kuchinja zvatinenge tasarudza. Dzimwe nguva tinofanira kuongorora chisarudzo chatakaita uye kana zvichiita tochichinja. Ona zvakaitwa naJehovha kuvaNinivhi munguva yaJona. “Mwari wechokwadi akaona mabasa avo, kuti vakanga vatendeuka panzira yavo yakaipa; naizvozvo Mwari wechokwadi akazvidemba pamusoro pedambudziko raakanga ataura kuti aizovaunzira; akarega kuriunza.” (Jona 3:10) Paakaona kuti vaNinivhi vakanga vapfidza, Jehovha akachinja zvaakanga asarudza. Paakaita izvozvo, akaratidza kunzwisisa, kuzvininipisa uye tsitsi. Uyewo, kunyange paanenge akatsamwa Mwari haaiti zvisarudzo asina kufunga sezvinowanzoitwa nevanhu vakawanda.
15. Chii chingaita kuti tichinje chisarudzo chedu?
15 Dzimwe nguva zvakanaka kuti tiongororezve chisarudzo chatakaita. Izvi tinogona kuzviita kana zvinhu zvikachinja. Dzimwe nguva Jehovha aichinja zvaainge atonga paichinja zvinhu. (1 Madz. 21:20, 21, 27-29; 2 Madz. 20:1-5) Kana tikaziva zvimwe zvinhu tinogona kuva nechikonzero chakanaka chekuchinja chisarudzo chedu. Mambo Dhavhidhi akaudzwa mashoko ekunyepa nezvaMefibhosheti muzukuru waSauro. Paakazoudzwa chokwadi, akachinja chisarudzo chake. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Dzimwe nguva kunenge kuri kuchenjera kuti tiitewo saizvozvo.
16. (a) Ndezvipi zvimwe zvinogona kutibatsira kuita zvisarudzo nekuchenjera? (b) Nei tichifanira kuongorora zvisarudzo zvatakaita uye tingazviita sei?
16 Shoko raMwari rinotinyevera kuti tisamhanya patinenge tichida kuita zvisarudzo zvinokosha. (Zvir. 21:5) Patinotora nguva yedu tichinyatsoongorora chisarudzo chatinenge tichida kuita, kazhinji kacho tinobudirira. (1 VaT. 5:21) Asati asarudza zvekuita, anenge ari musoro wemhuri anofanira kutsvakurudza muBhaibheri nemuzvinyorwa zvesangano uyewo kunzwa kuti vamwe vari mumhuri vanofungei. Yeuka kuti Mwari akakurudzira Abrahamu kuti ateerere zvaitaurwa nemudzimai wake. (Gen. 21:9-12) Vakuru vanofanirawo kutsvakurudza. Uye kana vari varume vanonzwisisa uye vanozvininipisa, pavanowana mamwe mashoko anoratidza kuti vanofanira kuchinja zvavakambosarudza, havaregi kuchinja vachityira kuti vanhu havazovaremekedzi. Vanofanira kugara vakagadzirira kuchinja mafungiro avo nezvisarudzo zvavo pazvinenge zvakakodzera uye tose tinofanira kuvatevedzera. Izvi zvinoita kuti muungano muve nerugare nekubatana.—Mab. 6:1-4.
ITA ZVAUNENGE WASARUDZA
17. Tingabudirira sei pakuita zvisarudzo?
17 Zvimwe zvisarudzo zvakakura kupfuura zvimwe. Zvisarudzo zvakakura zvinoda kuti tinyatsofunga nekunyengetera, uye izvi zvinogona kutora nguva. Vamwe vaKristu vanofanira kusarudza kuti vopinda muwanano here kana kuti kwete uye kuti ndiani wavangaroorana naye. Chimwe chisarudzo chakakura chinogona kuita kuti tiwane makomborero akawanda ndechekuti topinda riini mubasa renguva yakazara. Patinenge tichiita zvisarudzo zvakadaro, zvakakosha kuti tinyatsovimba kuti Jehovha anotipa mazano akanaka. (Zvir. 1:5) Saka zvakakosha kuti titsvake mazano muBhaibheri uye tinyengetere kuti Jehovha atitungamirire. Uye yeuka kuti Jehovha anogona kuita kuti tive neunhu hunodiwa kuti tiite zvisarudzo zvinoenderana nekuda kwake. Paunenge uchifanira kuita zvisarudzo zvinokosha, gara uchizvibvunza kuti: ‘Chisarudzo ichi chicharatidza kuti ndinoda Jehovha here? Chichaita kuti mhuri yangu ifare uye ive nerugare here? Uye chicharatidza here kuti ndine mwoyo murefu nemutsa?’
18. Nei Jehovha achitarisira kuti tizvisarudzire tega?
18 Jehovha haatimanikidzi kuti timude uye kuti timushumire. Tinofanira kusarudza tega. Sezvo akatipa rusununguko rwekusarudza, anoremekedza kodzero yedu ‘yekuzvisarudzira’ kuti tinoda kumushumira here kana kuti kwete. (Josh. 24:15; Mup. 5:4) Asi anotarisira kuti tiite zvatinenge tasarudza tichishandisa Shoko rake. Kana tiine kutenda mune zvatinorayirwa naJehovha uye tichishandisa mazano aakatipa, tinogona kusarudza nekuchenjera. Uye ticharatidza kuti takatsiga munzira dzedu dzose.—Jak. 1:5-8; 4:8.